I-Citrine-i-quartz emthubi-Uhlaziyo olutsha lwe-2021 -Ividiyo emnandi
Amatye e-citrine amatye anentsingiselo, ilitye lokuzalwa likaNovemba. Senza ubucwebe besiko ngamatye asikiweyo okanye ekrwada asetiweyo njengamacici, amakhonkco, isacholo somqala, isongo okanye isangqa.
Thenga i-citrine yendalo kwivenkile yethu
Iindidi ezahlukeneyo zekartz. Umbala we-citrine uvela kumbala omthubi ophuzi ukuya kwiorenji enzulu. Kungenxa ye- ifriji ukungcola. Inqabileyo yendalo inqabile. Amatye amaninzi orhwebo ziiamethyst okanye nawo quartz etshaya uye wafumana unyango lobushushu. Nangona kunjalo, iamethyst ephathwa shushu iya kuba nemigca emincinci kwikristale. Ngokuchasene nokubonakala kwelitye lendalo okanye ukubonakala komsi.
Kuphantse kube nzima ukwahlula phakathi kokucheba ilitye kunye netopazi etyheli ngokubonakalayo. Kodwa bahluke ngobunzima. IBrazil ngumvelisi ophambili wegugu lelitye. Phantse imveliso yayo ivela kummandla waseRio Grande do Sul. Igama livela kwigama lesiLatini elithi citrina. Ithetha ukuba tyheli kwaye ikwayimvelaphi yegama elithi citron.
Intsingiselo yeCitrine kunye neepropathi zokuphilisa
Ilitye lesithathu lePlexus Chakra ilitye
Zilungile ntoni iikristali ze-citrine?
Yeyiphi chakra edibene ne-citrine?
Ixabisa malini i-citrine?
Ngaba unokugqoka i-citrine imihla ngemihla?
Ngawaphi amandla enesitrine?
Yiyiphi i-citrine efanelekileyo?
Uyinxiba phi iringi yecitrine?
Usebenza njani nge-citrine, i-plexus yelanga yokuzithemba?
Ilitye leCitrine laxabiswa okokuqala njengelitye eliyigolide elityheli eGrisi. Phakathi kuka-300 no-150 BC. Ngexesha lamaGrike. I-quartz etyheli yayisetyenziswa ngaphambi koko ukuhombisa ubucwebe kunye nezixhobo. Kodwa ayifuniswanga kakhulu
Isibulali 33.64 CT, ukusuka Takeo, Cambodia
I-Quartz yiminerali. Ubume bayo yi-silicon kunye neeathom zeoksijini. Kwisakhelo esiqhubekayo seSiO4 i-silicon – oksijini tetrahedra. Ngeoksijini nganye ekwabelwana ngayo phakathi kweetrahedra ezimbini. Ukunika ifomula yeekhemikhali iyonke ye-SiO2. Ikwayindawo yesibini yezimbiwa ezininzi kuninzi kwilizwekazi lase-Continental, ngasemva kwefeldspar.
Zininzi iintlobo ezahlukeneyo ze-quartz. Zizona zigugu ezixabisekileyo. Ukususela mandulo, iindidi ze-quartz ziye zona ziyiminerari ezisetyenziswa kakhulu. Ukwenziwa kwezinto zokugcoba kunye neentsika zelitye. Ikakhulukazi e-Eurasia.
Abo banemihla yokuzalwa ngoNovemba banamatye amabini okuzalwa amahle anokukhetha kwiitopazi kunye namatye okuzalwa e-citrine. Itopazi iza ngemnyama yomnyama, ilitye lixabiseke ngenxa yemibala yalo etyheli kunye neorenji. Omabini la matye okuzalwa kaNovemba ayaziwa ukuba anamandla okuzola ngelixa bezisa ithamsanqa kunye nemfudumalo kulowo uzinxibileyo
Umbala omthubi we-citrine sisalathiso seentlobo ezithile zemibala ye-quartz engumbala onzulu ophakathi umbala otyheli wegolide. Eli litye lishwankathelwe ngamaxesha ahlukeneyo njengombala omthubi, luhlaza-tyheli, mdaka ngwevu okanye orenji.
Indawo yoqobo ekubhekiswa kuyo ngombala otyheli yayiziqhamo zesitron. Ukusetyenziswa kokuqala kwelitye elinqabileyo njengombala kwisiNgesi kwakungo-1386. Ekupheleni kwexesha lesiNgesi nakwisiNgesi samandulo igama lombala lasetyenziswa kwiimeko ezahlukeneyo kunanamhlanje kwaye linokuba bomvu okanye bumdaka ngombala otyheli, okanye orenji, okanye yegolide evuthiweyo.
Intsingiselo yokomoya yesitrine yimibala yayo etyheli ebonisa iimpawu zokomoya zovuyo, ubuninzi kunye nokuhanjiswa. Njengeglasi ehlaziyayo yelemonade, inokuzisa ngokukhawuleza, kunye nokukhetha amandla kwabo bayisebenzisa ngenkuthalo nangenhlonipho.
Ngamaxesha oxinzelelo oluphantsi ukuya kumodareyitha, ilitye ngumlingani ogqibeleleyo wokuphinda ulungelelanise amandla akho abuyele kulungelelwaniso. Ngokwahlukileyo, ezinye, iikristali ezinamandla ngakumbi kunokuba yimfuneko ukuphilisa okunzulu.
Ukukhuthazwa kweCitrine lilitye elityheli elinamandla eliphethe amandla elanga. I-crystal ayinawo amandla angalunganga, kwaye ayifuni ukucocwa. Ikhupha umsindo kwaye ihlambulule i-aura.
Iyomeleza, iyonyusa inkuthazo, kwaye iphakamisa ukuzithemba, amandla omntu, kunye nobuchule bokuyila. Izisa ulonwabo kunye nesisa, ikhuthaza ukuzola kwangaphakathi, kunye nemilinganiselo ye-yang yang energy.
I-crystal inokuphucula uxinzelelo, kwaye ilungele ukoyisa uxinzelelo, uloyiko kunye ne-phobias. Lilitye elilungele ukusetyenziswa ukubonisa iminqweno yakho kunye nokwenza ithemba.
I-Citrine phantsi kwe-microscope
Isebenza njani i-citrine? Inokukunceda ukomeleza ukuzithemba kunye nokuhamba kakuhle kwamandla kunye nokujikeleza komzimba. Ikwaqwalaselwa iluncedo ekuphuculeni ukugaya kunye nokomeleza ukunyamezela komzimba. Ukutyhubela imbali nakwiinkcubeko ezininzi amatye ayesaziwa njengelitye lomrhwebi.
isebenza njani ikristale nge chakra? Lelinye lamatye abalulekileyo kwi-chakra chakra, eyenza ukuba ibe sisiseko sokuyila kunye nokubonakaliswa. Le resonance kunye ne-chakra chakra ivumela umntu ukuba avuse ubuchule babo bengcinga yoyilo.
Umbala we-citrine oxabiseke kakhulu obomvu-orenji oxabisa malunga ne- $ 30 yeedola kwi-carat, kwaye ifunyanwa rhoqo eBrazil-amatye anqabileyo alo mbala ngamanye amaxesha abizwa ngokuba ngumlilo citrine. Iintlobo ezikhaphukhaphu zombala wamatye anqabileyo amthubi, efumaneka rhoqo eBolivia, anexabiso elisezantsi elimalunga ne- $ 10 yeedola kwi-carat nganye
Ukunxiba yonke imihla yeyona ndlela ilungileyo yokubamba amandla elitye kwaye ulinxibe ngesinye isongo kuya kunceda ukwandisa iminqweno yakho.
Kukholelwa ukuba ibalulekile ekuphiliseni isiqu sakho sokomoya ngokunjalo, njengesicoci esinamandla kunye nesihlaziyo. Iqukethe ubuhle bokuziphilisa, ukukhuthaza kunye nokuziphucula. Ukuthwala amandla akho elanga, kulunge kakhulu ukoyisa uxinzelelo, uloyiko kunye ne-phobias.
Ngokubanzi owona mbala uxabiseke kakhulu ngumbala o-orenji ogcwele ngokunzulu ogcwele, ufumaneka kakhulu eBrazil nangona iUruguay ivelisa amatye anemibala emangalisayo. Iorenji egolide phantse ebomvu ebomvu iMadeira gem ngumzekelo olungileyo wombala ofunwayo.
Isangqa kufuneka sinxitywe kumnwe wesalathiso wesandla sasekunene. Qiniseka ukuba uyayinxiba kusasa ngoLwesine ngexesha leShukla Paksh ngaphambi kokuphuma kwelanga.
Yibeke kwi-chakra yakho yesithathu okanye kwi-plexus chakra yelanga kangange-10-15 imizuzu kusasa nangokuhlwa ngenjongo yokuphucula ukuzithemba kwakho okanye ukuzithemba kwakho.
Qiniseka ukuba uyalihlambulula eli litye njengoko lithatha ukungakhathali kwi-aura yakho nakwimeko-bume yonke imihla. Ungayibeka kwisitya serayisi ecaleni kwebhedi yakho ebusuku kwaye uyihlawule ngesiqinisekiso sakho kusasa.
Indalo yendalo iyathengiswa kwivenkile yethu yegem
Senza ubucwebe be-citrine ngokwesiko njengamakhonkco okuzibandakanya, izacholo zomqala, amacici e-stud, izacholo, namacici… Nceda Qhagamshelana nathi ngesicatshulwa.
Isibulali 5.17 CT
Isibulali 10.21 CT
Isibulali 6.75 CT
Isibulali 7.03 CT
Isibulali 3.73 CT
Isibulali 4.45 CT
Isibulali 7.56 CT
Isibulali 2.07 CT